Apple ga-ebido beta mbụ nke ngwa ngwa nke AirPods Pro | Esi m mac
Apple ga - amalite beta nke izizi nke AirPods Pro
Toni Cortes | 11/06/2021 14:00 | Ngwa
Na oge mbụ mgbe ọ bụla, Apple na-ewepụta ngwa ngwa AirPods na beta tupu maka ndị mmepe iji nwalee. Akwụkwọ ọhụrụ.
Dị ka a ga - asị na ọ bụ sọftụwia, Apple kwuru taa na ụbọchị ole na ole ọ ga - ewepụta beta mbụ nke ngwa ngwa maka ekweisi Apple. Kpọmkwem, ha ga-abụ maka AirPods Pro. Companylọ ọrụ ahụ chọrọ ijide n'aka na ọ gaghị enwe ahụhụ tupu ịtọhapụ ụdị ikpeazụ maka ndị ọrụ niile. Nke a bu ihe ohuru, n'enweghi obi abua.
Na ngosi gara aga Mọnde Tim Cook ya na ndi otu ya kowara anyi akwukwo ndi ozo nke a ga-etinye n’ime ngwa Apple n’afọ a, na-emelite ngwanrọ ha. Ma dị ka na-ama anyị na-agwa Fewbọchị ole na ole gara aga, AirPods ga-enwekwa mmụba dị ukwuu site na ngwa ngwa ọhụrụ.
Na Apple ahụwo ihe kwesịrị ekwesị na mmezi ndị a kwesịrị ịnwale nke ọma tupu ịtọhapụ ngwa ngwa maka ndị ọrụ niile. Ya mere, dị ka ngwanrọ ọ bụla ọzọ, ọ ga-ahapụ beta AirPods Pro ngwa maka ndị mmepe n'ime ụbọchị ole na ole. Ọ ga-abụ primera vez hapụ ya ka o mee ya.
Nke a ga - ekwe ka mmepe nke atụmatụ ọhụrụ na iOS na macOS maka AirPods, yana mee ka atụmatụ ọhụrụ a ga - etinye n'ọrụ n'ọdịnihu, gụnyere Nkwalite Mkparịta ụka (guzobe ụda halos) na Mbelata mkpọtụ gburugburu ebe obibi (mkpọtụ mkpọtụ).
Companylọ ọrụ ahụ enyebeghị ụbọchị maka mbido dị otú ahụ, ma kpọtụrụ AirPods Pro aha, yabụ edoghị anya na a ga-enyekwa ngwa ngwa beta maka AirPods na AirPods Max. Anyị ga-echere maka ozi ndị ọzọ na nke a.
O doro anya, ndị a niile ọhụrụ atụmatụ ga-achọkwa na kwekọrọ ekwekọ mmelite ka iOS 15, iPadOS 15ma macOS Monterey, ha niile amalitelarị na beta phase kemgbe Mọnde gara aga maka ndị mmepe Apple niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ngwa » Apple ga - amalite beta nke izizi nke AirPods Pro
Apple TV + na-aga n'ihu iru nkwekọrịta nke na-enye ya nhọrọ kachasị mkpa
Etu esi etinye macOS Monterey onye nrụpụta beta